gvSIG: Mawduucyada 36 ee Lixda Maalmoodba - Geofumed
gvSIG: Mawduucyada 36 ee Shirka Sixth
Nofeembar, 2010 Baridda CAD / GIS, GvSIG
Laga soo bilaabo 1 ilaa 3 ee Diseembar lixda bilood ee shirarka gvSIG ayaa lagu qaban doonaa Valencia. Munaasabaddani waa mid ka mid ah istaraatiijiyadii ugu fiicnaa ee joogtada ahaa ee ay hay'addu u dallacday sii waarida software-ka oo aan marnaba joojin in la yaabto sababtoo ah suurtagalnimada in la galo suuqa caalamka.
Wax yar oo yar, barnaamijka bilaashka ah ayaa ku qaatay goobo qiimo leh oo ku yaal niche halkaas oo barnaamijka macaamiisha uu leeyahay wax badan oo uu ku deeqo. Marka laga hadlayo gvSIG, waxaa si gaar ah loogu talagalay inuu noqdo Hindisiis Hispanic, oo leh aragti xiiso leh iyo dadaal adag oo loogu talagalay nidaaminta labada geedi socodka iyo khibradaha codsigooda.
Deedka jilicsan oo lacag la'aan ah waa mid ballaadhan, waxaad kaliya u baahan tahay inaad aragto soo koobitaanka bandhigyada aan muujiyay waxa ka mid ahaa FOSS4G 2010. Waxaan ognahay in qaar badan oo ka mid ah dadaalladani aysan laheyn jawi joogta ah ilaa ay ka midoobaan dadaalada loogu jiro joogteyn joogto ah oo ku saleysan bulshada. Taas marka la eego, dhammaanteen waxaan rajeyneynaa in sanado yar gudahood dadaalka gvSIG loo aqoonsan doono mid ka mid ah moodooyinka ku dhasha qanacsanaanta isticmaalka, halkii ay ka noqon lahayd feejignaan xor ah; sida waxa laadhuu Álvaro Angiux:
Bulshadu waxay heshay gvSIG mashruuc kaas oo wadashaqeyn iyo aqoonta la wadaagay ay qayb ka ahayd koodhadhkeedii hidde-wade, waxay heshay mashruuc oo dhinacyo farsamo ay muhiim u yihiin; Ma noqon karto mid kale, laakiin ma ahan kuwa kaliya.
Meelaha mawduuca ah ee lagu daaweyn doono maalmahaas waxay noqon doonaan kuwa kale:
Geodesy iyo Navigation
Sawirrada sawir-qaadashada iyo Raadinta fog
Cartography iyo SIG
Qalabka Xalalka sare iyo codsigooda.
Dhammaan waraaqaha waxay leeyihiin tarjumaad Isbaanish iyo Ingiriis ah marka ay muuqaalku ku qoran yihiin Ingiriis. Hal bil kadib markii laga bilaabo, qorshe horudhac ah ayaa la daabacay, inkasta oo aynaan ogaanno barnaamijka kama dambaysta ah Marka la barbardhigo, waxaa jira SEXTANTE, NAVTABLE, IDE, GRASS, gvSIG Mini iyo semrollo gvSIG 2.0; sidoo kale maalmo ka hor maalinta ayaa la qaban doonaa EclipseDay-MoskittDay iyo CodeSprint.
Waxa aan ku yeelan doono maalinta: halkan waxaa ku jira liis dhakhso leh mawduucyada 36:
- Qorshaha Multimodal jidadka magaalooyinka baska
- gvSIG Fonsagua: Nidaamka macluumaadka ee maamulka maareynta shabakadaha sahayda biyaha iyo fayadhowrka
- Nidaamka Sharciga ee software lacag la'aan ah ee maamulka
- Fursadaha ay tahay Sharciga Dhismaha iyo Adeegyada Macluumaadka Juquraafiyeed ee Spain (LISIGE) waxay bixiyaan dadka isticmaala gvSIG
- Migração gvSIG ee SIG-RB - SIG da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, SP - Brazil
- gvSIG Desktop oo ah qalab loogu talagalay kormeerka warshadaha tijaabada ah ee a kaynta ee aragrarias ee Brazil
- Nidaamka maamulka dhaxalka Kuuriyada Kuba ku taal gvSIG 1.9
- Dhaxalka viticulture iyo muuqaalka dhulka beerta beertayda ee joqraatiirta lagu hirgeliyo gvSIG
- Shaqooyinka cusub gvSIG Mobile 1.0
- GvSIG Sensor Mobile, oo loogu daro ururinta cabirrada iyo fiirsashada dareemayaasha berrinka dhexdiisa
- gvSIG mini, oo ah sawir khariidad lacag la'aan ah
- Qalabka naqshadda qorsheynta horumarinta magaalooyinka iyo xuduudaha ee xagjirnimada
- Soo bandhigida habka barbaarinta oo ku saabsan barashada GIS ee ku salaysan gvSIG ee Jaamacadda Rennes 2 (Brittany-France) oo ah heer jaamacadeed oo juqraafi ah
- Isku dhacyo u dhaxeeya gvSIG iyo Master Master UNIGIS ee GIS Management
- gvSIG EIEL: codsi lagu maamulayo macluumaadka degmada
- Maareynta xogta gvSIG ee maamulka degaanka
- GisEIEL 3.0: Design and dhismaha kordhin gvSIG 2.0
- geneSIG - Macaamiil GvSIG ah oo loogu talagalay adeegga cusub ee cusub kaabayaasha
- WG-Edit: gvSIG kordhin cusub oo loogu talagalay caleemaha waddada maamulka
- Qiimaynta gvSIG iyo Qalabka Sextante ee Falanqaynta Hydrological
- Infrastructure of Macluumaadka Muuqaalka ee Fuenlabrada
- GIS iyo macluumaadka lacag la'aanta ah ee codsiyada dhinacyada: Maareynta degdeg ah
- Codsiga gvSIG si loo eego dukumiintiyada laga soo saaray mashruuca PNOA-POEX
- Isdhexgalka GearScape ee gvSIG
- Qormo muuqaalka muuqaalka multiparametric gvSIG
- Helitaanka sawirada raajo laga bilaabo gvSIG adoo isticmaalaya WKTRaster
- Mining of trajectories: Soo jeedinta model model ah
- Abuuritaanka sharaxa kheyraadka ee gvSIG GeoCrawler
- Infrastructure of Macluumaadku waaee 3D ee Golaha Torrent City iyada oo ku saleysan software lacag la'aan ah
- OSGeo, aasaaska software-ka bilaashka ah iyo cutubka Isbaanishka ku hadla
- Isticmaal gvSIG, DielmoOpenLiDAR iyo SEXTANTE si loo soo saaro qiyaaso ballaaran Macluumaadka LiDAR
- Qiimaynta guryaha dhismaha dhismaha maamulka ee UNESCO ee siyaasadeed. Santa Ana de Coro
- OCEANTIC. Barnaamijka wareejinta, muuqaalka iyo maareynta macluumaadka dijitaalka badda sare
- Farsamooyinka juqraafi lagu dabaqay daraasadda goobaha qadiimiga ah ee waqooyi-galbeed ee gobolka Buenos Aires
- Horumarinta gvSIG ee maamulka iyo ka faa'iideysiga macluumaadka goobaha qadiimiga ah
- Mobile GeoWeb - Codsi loogu talagalay aaladaha moobaylka ee lagu ogaanayo miisaaniyada qiyaasan ee loogu talagalay daraasado daraasad daraasad.
- Sida loo sameeyo a Geoportal laga bilaabo gvSIG daqiiqado 15
Halkan waxaad ka arki kartaa in badan oo ka mid ah maalinta, iyo dib u eegista markii hore.
Post Previous«Previous Hagaha isticmaalka GPS iyo saldhigga guud ee Leica
Post Next Dhibaatooyinka tifaftiraha qoraalka: Microstation V8 ee Vista iyo Windows 7Next »
2 Jawaab "gvSIG: 36 mawduucyada lixda Maalmood"
«... ka dib markii aan hubin, Mayas wuu khaldanaa»
Dib u dhac isagu wuxuu leeyahay:
Maqnaanshaha mawduuca 37. gvSIG 2.0, maalinta ugu yar ee la filayo ...